Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Dakar na New York City na Washington na Air Senegal ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -emegharị na Senegal • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Air Senegal na -ebuga ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu John F. Kennedy nke New York.
Air Senegal kwuputara ọrụ ọdụ ụgbọ elu Baltimore Washington International Thurgood Marshall.
A ga -esi na Dakar, Senegal buru ụgbọ elu US ọhụrụ abụọ a.
Air Senegal, onye na-ebu ọkọlọtọ mba Senegal, bidoro ụgbọ elu mbụ ya ugbu a na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa John F. Kennedy nke New York na ọdụ ụgbọ elu Baltimore Washington International Thurgood Marshall, nke mbụ nke ọrụ ọhụrụ ugboro abụọ kwa izu n'etiti Dakar na obodo abụọ US.
Flight HC407 hapụrụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Dakar Blaise Diagne na 2:56 ụtụtụ wee rute n'ọdụ ụgbọ elu JFK New York (Terminal 1) na 06:51 ụtụtụ taa. Ndị njem maka mpaghara Washington na -aga n'ihu na ụgbọ elu a mgbe ha gafere njem mbata na ọpụpụ na New York.
Ụgbọ elu ahụ rutere n'ọdụ ụgbọ elu Baltimore Washington (BWI) n'elekere 11:08 nke ụtụtụ ebe ụgbọ mmiri ọdịnala kelere ekele ụgbọ mmiri. Ụgbọ elu ịlaghachi ga -apụ na Baltimore na 08:25 pm site New York JFK (Nkwụsị nke 1) maka Dakar ebe a na -atụba ya na 12:25 pm n'echi ya.
Ọrụ ọhụrụ a ga-arụ ọrụ na Tọzdee na Sọnde site na iji ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ Airbus A330-900neo, na-enye akwa ụlọ 32 na azụmaahịa, oche 21 na Premium Economy na oche 237 na klaasị Economy, sistemụ ntụrụndụ, ike oche. , yana njikọ Wi-Fi nọ n'ụgbọ elu. Ikuku Senegal na -enye njikọ dị mma maka ndị njem USA site na Dakar n'akụkụ abụọ ahụ ruo Abidjan, Conakry, Freetown, Banjul, Praia, Bamako, Nouakchott, Douala, Cotonou na Libreville.
N’afọ 2019, ihe karịrị otu nde ndị njem efegharị n’agbata USA na West Africa nke a na -atụ anya na ọ ga -eto n’ihu na mbido ụzọ ọhụrụ a. Senegal bụ nnukwu azụmahịa mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka na ebe ndị njem yana ịbụ isi ụlọ ọrụ United Nations na West Africa.
Ibrahima Kane, onye isi ụlọ ọrụ na Air Senegal kwuru, sị: “Ebumnuche anyị bụ ịnye njem dị mma na ntụsara ahụ n'etiti USA, Senegal na West Africa. Ebe ala Dakar jikọtara ya na ọtụtụ njikọ nke Air Senegal site na isi ya gaa n'obodo ukwu niile dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Afrịka ga -eme ka ụzọ ọhụrụ a too site n'ike ruo n'ike. Na mgbakwunye, anyị na -atụ anya ịkpali ndị njem nlegharị anya America na Senegal ka ha nyochaa akụkọ ọdịbendị ya bara ụba, osimiri ụwa na nri pụrụ iche gafee mba ahụ ”.
Air Senegal, bụ ụgbọelu na -ebu ọkọlọtọ nke Republic of Senegal. Emepụtara na 2016, ọ bụ steeti nwe ya site na ogwe ego itinye ego Caisse des Dépots et Consignation du Sénégal. Ọ dabere na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Blaise Diagne dị na Dakar, Senegal.